करिअर रिभर गाइड - करियर - साप्ताहिक
करिअर रिभर गाइड
विदेशमा नेपाली रिभर गाइडको माग बढिरहेको छ । राम्रो कमाइ हुने भएकाले युवाहरू रिभर गाइड पेसातर्फ आकर्षित भैरहेका छन् । अमेरिका, नर्वे, बेलायत, इटाली, टर्की, भारत, भुटान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान आदि देशमा यतिबेला ३ सयभन्दा बढी नेपाली र्‍याफ्टिङ गाइडले रोजगारी पाएका छन् ।
टर्की, आइसल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, क्यानाडा, भुटान, नर्वे, स्पेन, बेलायत, श्रीलंका, अस्ट्रिया, जर्मनी आदि मुलुकका निजी कम्पनीहरूले ‘रिभर गाइड’ का लागि नेपालीहरूलाई पहिलो रोजाइमा राखेर रोजगारी दिइरहेका छन् ।
चरौंदी, धादिङका रिभर गाइड अरुण थपलिया तीन महिना नेपालमा तथा नौ महिना विदेशमा हुन्छन् । सन् २००८ मा रिभर फन कम्पनीबाट रिभर गाइडको पेसा सुरु गरेका थपलियाले भारत, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, नर्वे आदि देश चहारिसकेका छन् । विभिन्न देशमा र्‍याफ्टिङ गाइड गरेबापत उनी मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । रिभर गाइडको कमाइ देश हेरेर फरक–फरक छ ।
थपलियाको अनुभवमा टर्कीमा १ हजार डलर, नर्वेमा ३ हजार युरो, यूएईमा ९ सय डलर कमाइ हुन्छ ।
यतिबेला थपलिया आफ्ना सुरुवातका दिनहरू सम्झन्छन् । चरौंदीस्थित उनको जग्गाको छेउमा एउटा खोला थियो । विदेशी पर्यटकहरू आइरहने उक्त ठाउँमा उनी पौडी खेल्थे । त्यही बेला उनी विदेशी पर्यटकहरूको संगतमा पुगे । बिस्तारै पर्यटकहरूको झोला बोक्ने, उनीहरूको खाना बनाउने काम गर्न थाले । कायक र डुंगा चलाउँदा–चलाउँदै उनलाई यो पेसाले आकर्षित गर्‍यो ।
नेपाली रिभर गाइडहरू अहिले युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलियासम्म पुगिरहेका छन् । विदेशीहरू नेपालका रिभर गाइडको काम रुचाउँछन् । विदेशमा काम प्राप्त गर्न इन्स्ट्रक्टरले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाली गाइडले नेपालबाहिर रोजगारी पाउँछन् । जापानमा मात्र अहिले झन्डै १ सय ५० नेपाली रिभर गाइड कार्यरत छन् । जापानको राम्रो कमाइले पनि धेरैलाई आकर्षित गरेको छ । नेपालमा र्‍याफ्टिङको सिजन सकिँदा जापानमा त्यसको सिजन सुरु हुन्छ । यसले गर्दा नेपाली गाइडहरू नेपाल र जापान दुवै देशमा काम गर्न सक्छन् । जापानका गिफु, होकाइदो, क्योतो, साइतामा आदि क्षेत्रका नदीहरूमा नेपाली गाइडले काम पाइरहेका छन् ।
सामान्यत: जापानमा एक जना रिभर गाइडले प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्छन् । इन्टनेसनल र्‍याफ्टिङ फेडरेसनका इन्स्ट्रक्टर शुक्र तामाङ अन्तर्वार्ता दिएर छनौट भै जापान पुग्ने पहिलो नेपाली गाइड हुन् । तामाङले नेपाल–जापान आउजाउ गर्न थालेकै आठ वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ । अरूभन्दा क्षमतावान् भएकाले नेपाली गाइडको माग बढी छ– तामाङले साप्ताहिकलाई बताए ।
नेपालको साहसिक जलयात्राका क्षेत्रमा सक्रिय नाम हो— मेघ आले । २७ वर्षअघि नै ‘रिभर गाइड’ बनेका आलेले जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बेलायत, टर्की, क्यानाडा तथा भारतका नदीमा र्‍याफ्टिङ गाइड गरेको अनुभव बटुलेका छन् । पर्यटनका लागि र्‍याफ्टिङको महत्वलाई अरू देशले ठूलो प्राथमिकता दिएका छन् । यूएई र बेलायतले अर्बौं डलर खर्च गरेर मानवनिर्मित नदी बनाएका छन् । आले भन्छन्– अमेरिकामा र्‍याफ्टिङका लागि विद्युत्गृह नै भत्काएर पानीको बहाव बढाइएको छ । नेपालमा र्‍याफ्टिङका लागि वर्षापछिको ६ महिना उपयुक्त मानिन्छ । नेपालमा अफ सिजन हुँदा नेपाल बाहिर बल्ल सिजन सुरु हुन्छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङका एजेन्ट्स (नारा) का अध्यक्ष नानीकाजी थापाका अनुसार विदेशमा पूर्णकालीन रिभर गाइडहरूले राम्रो कमाइ गरिरहेका छन् । नेपालमा एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सन् १९६८ मा सुनकोसी नदीमा र्‍याफ्टिङ गरेको इतिहास छ । अमेरिकी र युरोपेलीहरूको रुचिमा नेपालमा र्‍याफ्टिङ सुरु भएको मानिन्छ । चितवनमा टाइगर टप्स होटल खोल्ने विदेशीहरूले हिमालयन रिभर एक्सप्लोरेसन कम्पनी मार्फत् सन् १९७५ पछि त्रिशूली नदीमा र्‍याफ्टिङको व्यवसायिक विस्तार गरेका थिए । आज ८ सयभन्दा बढी नेपाली र्‍याफ्टिङसँग सम्बन्धित सात दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा आबद्ध छन् ।
नेपाल सरकारको पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ४० वटा कम्पनी छन् । बिनादर्ताका २० वटा छन् । विभिन्न कम्पनीले र्‍याफ्टिङका प्याकेज बनाएका छन् । ती कम्पनीले १ देखि १० दिनसम्मको र्‍याफ्टिङ प्याकेज चलाउँछन् । नेपाल सरकारले अरुण, तमोर, दूधकोसी, तामाकोसी, सुनकोसी, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेती, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली तथा सेती कर्णालीलाई तथा र्‍याफ्टिङका लागि खुला गरेको छ । विशेष गरी त्रिशूली र भोटेकोशी नदीमा रोमाञ्चक र्‍याफ्टिङ हुन्छ । नेपालका नदीहरू र्‍याफ्टिङका लागि संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ एसोसिएसनले भोटेकोसीलाई संसारकै सातौं उत्कृष्ट गन्तव्य मानेको छ ।
कसरी तालिम लिने ?
नेपाली रिभर गाइडहरूलाई तालिमपछि अमेरिकाको रेस्क्यु–थ्री इन्टरनेसनल, ह्वाइट वाटर रेस्क्यु टेक्निसियन (डब्लूआरटी) तथा स्विफ्ट वाटर रेस्क्यु टेक्निसियन (एसआरटी) का प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् । केही समययता नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन एकेडेमी (नाथम) ले पनि छोटो अवधिको र्‍याफ्टिङ गाइड तालिम दिन थालेको छ ।
प्रकाशित :कार्तिक ९, २०७४
नेपालगन्ज वरपरका पिकनिक स्पट
डिजिटल नेपाल एप्स
विज्ञानको लेखाइ तथ्यपरक हुनुपर्छ
सरकारी अधिकृत छाडेर सेयर मार्केटमा भाद्र २९, २०७६
नयाँ विषय र त्यसको तयारी श्रावण २६, २०७६
छोटो अवधिको प्राविधिक कोर्स श्रावण १२, २०७६
प्राविधिक शिक्षाको ढोका ग्रेडले छेक्दैन श्रावण ७, २०७६
फराकिलो बन्दै प्राविधिक शिक्षा असार ३१, २०७६
नयाँ गन्तव्यतिरको यात्रा असार २६, २०७६
विद्यार्थीको भविष्यमा अभिभावकको भूमिका असार २५, २०७६
कस्ता कलेज रोज्ने  ? असार २४, २०७६
ओमेगा : उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट असार २२, २०७६